Ukuseta iinketho zokujonga i-Icon kwi-Mac OS X
Emva kweeyure ezimbalwa zomsebenzi, iwindow yokuFumana kwimowudi ye icon inokujonga into enjengegumbi lokufikisa: Izinto ezisasazeke kuyo yonke indawo, njengoko kubonisiwe kwifolda yeZicelo kuMfanekiso 1.
Umzobo 1: Ngaba umntu othile ndiyacela ukucoca lo monakalo?
Ukubuyisela iodolo kwiDesktop yakho, cofa kuyo nayiphi na indawo evulekileyo yefestile esebenzayo emva koko ukhethe Jonga -> Ukucoca. Lo myalelo ushiya ii-icon phantse kwindawo enye kodwa uzifota kwigridi engabonakaliyo ukuze zilungelelaniswe, njengoko kubonisiwe kumfanekiso 2.
Umzobo 2: Ukuqulunqa akukho ngxaki ngomyalelo wokucoca imenyu.
Emva kokuba izinto zilungelelaniswe, sebenza kunye neenketho zokujonga i-icon. (Ngokwendalo, uya kufuna i-Finder esebenzayo kwimbonakalo ye-icon kuqala, ke khetha Jonga-> Njengee-Icons okanye ucofe UMYALELO + 1. J indlela emfutshane - ukubonisa ibhokisi yencoko yababini yeenketho ozibonayo kumfanekiso 3. (Khumbula ukuba ezi ndlela zezikhethwayo zezona zifumanekayo xa ujonga i icon.)
Umzobo 3: Useto olufumanekayo lokujonga icon.
Qaphela la maqhosha amabini oonomathotholo, akwabonakalayo kuluhlu lwebhokisi yencoko yababini yokujonga:
Le Window Kuphela: Khetha le Window Kuphela iqhosha lerediyo ukusebenzisa utshintsho olwenzayo kuphela kwi-Finder window evula xa uvula into ekhethiweyo-ngamanye amagama, into ebonakala kwibar yewindows.
Umzekelo, naluphi na utshintsho olwenziwe kuseto kuMzobo 3 luza kuchaphazela kuphela ifolda yezicelo kuba ibiyi-Finder esebenzayo iwindow xa ucofe u-COMMAND + J. (Usenokuba uqaphele ukuba igama lefestile liyavela njengesihloko sencoko yababini yokujonga. ibhokisi.)
Zonke iiWindows: Cofa kwiqhosha lonke lerediyo yeWindows ukufaka utshintsho olwenzayo kuzo zonke iifestile ozijonga kwimowudi yakho yangoku.
Ewe kunjalo, iMac OS X ikhumbula utshintsho olwenzayo ngaphakathi kwibhokisi yencoko yababini yencoko yababini, nokuba yeyiphi imowudi yokujonga oyilungiselelayo. Unokwenza nolunye utshintsho kule bhokisi yencoko yababini, kubandakanya
Ukuhlaziya ii icon zakho zeDesktop: Cofa uze utsale isilayidi soBungakanani be-Icon ukunciphisa okanye ukwandisa ii icon kwiDesktop yakho. Ubungakanani be icon buboniswa kwiiphikseli ngaphezulu kwesilayidi.
Ukuhlaziya ubhalo lwelebheli: Cofa phezulu nasezantsi iintolo ngasekunene kwebhokisi yokuhla kwesayizi yokubhaliweyo ukukhetha ubungakanani befonti (ngamanqaku) kwiilebhile ze icon.
Ukuhambisa umbhalo weleyibhile: Khetha nokuba kusezantsi (okungagqibekanga) okanye iqhosha lasekunene lerediyo ukukhetha phakathi kokubonisa isicatshulwa phantsi kweempawu zeDesktop okanye ngasekunene kweempawu.
Qhobosha kwiGridi: Nika amandla le bhokisi yokukhangela ukuba ilungelelanise ngokuzenzekelayo ii icon kwigridi ngaphakathi kwewindow, ngokungathi usebenzise i Umyalelo wokucoca imenyu.
NONE Kule bhokisi yokukhangela yenziwe ukuba isebenze, iMac OS X ibonisa inani lezinto ngaphakathi kwifolda nganye kwiwindow.
Bonisa imbonakalo yeKhonkco: Ukuba uyayenza le bhokisi yokukhangela, i-Finder ibonisa ii-icon zeefayile zemifanekiso usebenzisa umfanekiso omncinci womfanekiso. (Into epholileyo kwabo baneekhamera zedijithali- nangona kunjalo, ukubonisa ukujonga kuqala kuthatha ixesha elongezelelweyo lokulungisa kuba iMac OS X kufuneka ilayishe ifayile nganye yomfanekiso kwaye iyinciphise ezantsi ukuze iyile i icon.)
Gcina ucwangcisiwe ngu: Ukuhlela umboniso we icon kwiwindow, yenza ukuba le bhokisi yokukhangela ukhethe enye yezi ndlela zilandelayo kuluhlu lwayo lokuhla: ngegama, umhla oguqulweyo, umhla owenziwe, ubungakanani, okanye uhlobo lwento.
Ukukhetha imvelaphi: Ukukhetha imvelaphi yefestile, khetha elinye lamaqhosha amathathu erediyo apha:
• Mhlophe: Oku kungagqibekanga.
• Umbala: Cofa ukhetho lombala kwibloko ebonakala ukuba ukhetha olu khetho.
• Umfanekiso: Khetha eli qhosha lerediyo kwaye ucofe i Khetha iqhosha ukubonisa umgangatho uvule ibhokisi yencoko. Jonga kwindawo apho umfanekiso ufunwayo ugcinwe khona, cofa kube kanye ukuze ukhethe, emva koko ucofe u-Vula.
Emva kokuba zonke iinguqu zakho zenziwe kwaye ulungele ukubuyela emsebenzini, cofa ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yokuVala ukugcina useto lwakho.
ipilisi emhlophe ene gpi a5
5 htp kunye ne-zoloft
amayeza kuhlaselo loxinzelelo
zoom zoom vs zoom yedijithali